Shacabka gobolka waqooyi bari Kenya oo la sheegay in musuqmaasuqa aynan aad uga walacsaneyn – The Voice of Northeastern Kenya
Shacabka gobolka waqooyi bari Kenya oo la sheegay in musuqmaasuqa aynan aad uga walacsaneyn
Warbixin laga soo saaray ray’I aruurin ay sameyay shirakada darasaadka iyo cilmi baarista ee IPSOS ayaa lagu ogaaday in macluusha, musuqmaaasuqa iyo qiimaha noolosha oo sareeya ay yihin dhibatooyinka ugu waweyn ee heysta shacabka kenyaanka ah.
Musuqmaasuqa ayaa la ogaaday in uu yahay caqabada labaad oo ay boqolkiba 16 ee kenyaanka walaac ka muujinayaan in kasta oo shacabka ku nool gobolka waqooyi Kenya walaac ay ka muujinayaan wax isdabamarinta uu ka hooseeya midka kenyaanka kale oona lagu sheegay boqolkiba 12 halka dadka degan Nairobi ay boqolkiba 25 msuqmaasuqa ka deyrinayaan.
Tom Wolf oo ah khabiir ka faalooda arrimaha darasadka ayaa sheegay in musuqmaasuqa ka jira countiyada hoos tago gobolka waqooyi bari Kenya aynan warbaahinta si weyn u hadal hayn sidaas awgeedna inta badan warbixindaasi aynan dhagada shacabka ku dhicin walaacna ku beerin.
Fadeexadii lacagaha looga lunsaday waaxda qaran ee adeegsa dhalinyarada ee NYS ayay boqolkiba 84 ee kenyaanka carababeen halka boqolkiba 37 ay tusaalo u soo qateen m midi saameysay wasaarada caafimadka.
Dhanka macluusha hadaan eegno, boqolkiba 26 ee shacabka ku nool mamul goboleedyada gobolka waqooyi bari ayay cuno yari heysata. Sido kale waxaa la ogaaday ra’yi aruurintan ka dib in rayidka ka soo jeedo gobolka waqooyi bari ay boqolkiba 8 keli shaqa laanta u arkaan dhibaata taagan.
Qabyaalada ayaa la xusay in ay boqolkiba 4 ka jirto gobolada bartamaha, galbeedka iyo gobolka waqooyi bari.
Intii u dhaxeysay 17 ilaa iyo 19-kii bishan Disembar sanada 2015-ka ayaa darasaadkan la sameyay waxaana lagu ogaadaqy in boqolkiba 17 ee kenyaanka guud ahaan dalka aynan heysanin cuno ku filan abaarta awgeed.
Sido kale rayidka ayaa ah kuwo uu culeys ku hayo qiimaha noolosha oo sareeya iyo dhibatada la xiriirta musuqmaasuqa oo lagu tilmaamay mid ay maskaxdoodu ka daashay.
Boqolkiba 51 ee kenyaanka ra’yi arrurintan lagu wareystay ayaa doonaya in dowlada ay dhaqatiirta shaqa joojinta ku guda jiro siiso mushaar kordhin dhameystiran.
← Mucaradka dalka oo wacad ku maray in ay mar kale si weyn uga soo horjeedsanayaan isbedelada ku saabsan doorashooyinka
Madaxweynaha oo hadiyad u diray xidhibaanadii afxumaysay →